Tilmaamaha Caafimaadka CDC: Kuma filna Khadka Dalxiiska Carnival
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Tilmaamaha Caafimaadka CDC: Kuma filna Khadka Dalxiiska Carnival
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • saaciday inay • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka
25 min akhris
Carnival Cruise Line's Baashaal. Amaan noqo. borotokoollada iyo habraacyada ayaa la sameeyay iyadoo lala tashanayo khubaro caafimaad. Waxaa loogu talagalay inay noqdaan kuwo wax -ku -ool ah oo la jaanqaadi kara iyadoo xaaladda caafimaad ee dadweynaha ee hadda jirta ay sii xumaanayso.
Ilaa ogeysiis dambe, dhammaan hawlgallada Carnival -ka ayaa buuxin doona halbeeggan. Si markabka maraakiibtu uu si guul leh dib ugu bilaabo hawlihii una ilaalin lahaa kalsoonida meelaha ay booqdaan oo ay gaarsiiyaan safarradooda iyo waaya -aragnimada martida.
Khadka Dalxiiska Carnival waa khadkii ugu horreeyey ee dalxiis oo ka soo shiraacda Dekedda Baltimore tan iyo markii warshadaha oo dhan hakad galeen hawlgalladii.
Carnival Pride ayaa lagu wadaa inay maanta ka ambabaxdo Bahamas oo socdaal toddobo maalmood ah, iyadoo booqan doonta meelaha caanka ah ee Nassau, Freeport iyo jasiiradda gaarka loo leeyahay ee Half Moon Cay.
Kahor bixitaanka, munaasabad “Ku Laabo Madadaalo” ayaa lagu qabtay terminaalka inta lagu gudajiray kaas oo Madaxweynaha Carnival Christine Duffy, Carnival Pride Captain Maurizio Ruggiero iyo Agaasimaha Fulinta Dekedda Baltimore William P. Doyle uu jaray xarigga xafladda wuxuuna si rasmi ah u soo dhoweeyay martidii ugu horreysay ee doonta .
"Waan ku faraxsanahay inaan ku soo laabanno Baltimore, annagoo siineyna martidayada fasax nasasho leh oo ay si dulqaad leh u sugayeen laakiin sidoo kale waxay taageereysaa dhaqaalaha maxalliga ah waxaanan siinnaa shaqaalahayaga fursad ay ku taageeraan qoysaskooda ku sugan dalkooda," ayay tiri Christine Duffy , madaxweynaha Khadka Dalxiiska Carnival. "Baltimore waxay ahayd lamaane cajiib ah in ka badan toban sano waxaanan ku faraxsanahay inaan ku soo laabano madadaalada suuqan muhiimka ah kaas oo u adeega boqolaal kun oo martida Waqooyi Bari iyo Xeebta Atlantic."
"Waa maxay maalin weyn Dekedda Baltimore!" ayuu yiri Agaasimaha Fulinta Dekedda Baltimore William P. Doyle. “Waxaan sugeynay waqti dheer si aan dib ugu soo dhaweyno Carnival Pride ee Magaalada Charm. Baltimore's Cruise Maryland aad bay u argagaxsan tahay - terminaalka dalxiiskayagu wuxuu si toos ah uga baxsan yahay Interstate 95 iyo BWI Thurgood Marshall Airport waa 15 daqiiqo oo keliya. Goobta tareenka ayaa ku ag taal Baltimore's Inner Harbor oo caan ka ah adduunka, iyo sidoo kale Federal Hill, Fort McHenry, iyo Fells Point. Waxaa jira dalxiisyo badan, cunno, iyo ikhtiyaarrada wax iibsiga. Markaa ka soo shiraac Baltimore, ku raaxayso magaaladeena weyn, oo u dhoofo qaar ka mid ah jannooyinka kulaylaha ee ugu yaabka badan adduunka. ”
Khadka Carnival Cruise Line wuxuu bilaabay barnaamijkii socdaalka ee sanadka oo dhan oo ka yimid Baltimore sanadkii 2009 ilaa iyo markaasna wuxuu si wanaagsan u qaadey in ka badan hal milyan oo marti ah, taasoo ka dhigaysa Carnival lambarka koowaad ee hawlwadeennada maraakiibta ee dekedda.
Bishii Nofembar, markab cusub, Carnival Legend, ayaa beddeli doona Carnival Pride ee Baltimore marka Carnival Pride u wareego tagitaannada Tampa.
Carnival wuxuu bixiyaa xulashada ugu ballaadhan ee xulashooyinka safarka ee Baltimore, oo ay ku jiraan:
Lix iyo toddoba maalmood oo shiraac ah oo u socda Bermuda iyo The Bahamas
Safarrada siddeed maalmood ah ee Kanada/New England iyo Kariibiyaanka
14-maalmood Carneval Journeys waxay u dhoofaan Kanaalka Panama iyo koonfurta Caribbean ee qalaad.
Safarkii Carnival Sailabration oo saarnaa Halyeeyga Carnival bishii Maarso 2022 oo ay la socdeen hawlo gaar ah iyo madadaalo ay weheliyaan Khadka Carnival Cruise's 50th Xafladaha dhalashada
Qawaaniinta hawlgalka Carnival waxay ka badan yihiin talooyinka Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Maraykanka.
Carnival waxay sii wadi doontaa ka shaqaynta safarrada la tallaalay sida ku qeexan CDC, oo ay ku jirto in dhammaan shaqaaluhu si buuxda loo tallaalo.
Si taxaddar badan leh iyo ka jawaabista tirada sii kordheysa ee kiisaska COVID-19 ee Mareykanka oo ay sababtay kala duwanaanshaha Delta, Carnival ayaa cusbooneysiineysay borotokoollada iyo shuruudaha la xiriira tijaabinta safarka-ka-hor ee martida si buuxda loo tallaalay iyo siyaasadda maaskarada dushiisa.
Carnival waxay filaysaa in tallaabooyinkani ay noqon doonaan kuwo ku -meel -gaadh ah oo ay hagaajin doonaan hab -maamuusyadayada ku salaysan talada lataliyayaasha caafimaadka iyo caafimaadka dadweynaha.
Halkan waxaa ah tallaabooyin la qaatay oo lagu soo sheegay Khadka Dalxiiska Carnival
Dhammaan martida waa inay si taxaddar leh dib ugu eegaan talo-bixinta caafimaadka kahor safarka iyo ka hor safarka boggayaga internetka iyo Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada Mareykanka (CDC) .
MACLUUMAADKA GUDDIGA DARYEELKA: Si loo maareeyo maraakiibtayada la tallaalay, aad bay muhiim u tahay in dhammaan martidu ay ka feejignaadaan hal su'aal oo ah iimayl caddaynta tallaalka ka hor safarka doonida kaas oo u baahan in loo dhammaystiro qof kasta oo ku jira boos celinta. Martida waxaa laga codsanayaa inay cusboonaysiiyaan astaantooda Carnival.com iyaga oo wata macluumaadka ay hadda kula xiriiraan maaddaama aan kula xiriiri doonno emayl taxane ah. Fadlan akhri dhammaan waraaqahayaga oo dhammaystir dhammaan codsiyada macluumaadka ka hor-raacitaanka. Ku guul darreysiga u hoggaansanaanta codsiyada macluumaadka safarka kahor inta aan la gaarin waqtiga ku habboon waxay keeni doontaa baajinta.
TALLAALKA & HEERARKA IMTIXAANKA
Martida Talaalka Buuxa
Safarrada la tallaalay ayaa diyaar u ah martida helay qaddarkoodii ugu dambeeyay ee tallaalka COVID-19 ee la oggolaaday ugu yaraan 14 maalmood ka hor maalinta dhoofinta oo haysta caddaynta tallaalka.
Maraakiibta dhoofaysa ilaa Sebtember 12, 2021, martida si buuxda loo tallaaley waa inay sidoo kale soo bandhigaan natiijooyinka taban ee baaritaanka COVID-19 (PCR ama antigen) oo la qaaday saddex maalmood gudahood ka hor intaan la gelin. Tusaale ahaan, haddii dhoofintu tahay Sabtida, imtixaanka waxaa la qaadi karaa wakhti kasta Arbacada ilaa Jimcaha. Martidu sidoo kale waxay qaadan karaan imtixaanka subaxnimada marka la sii daayo ilaa inta loo ballanqaaday inay heli doonaan natiijooyinkooda imtixaanka ka hor waqtiga gelitaanka.
Laga bilaabo Sebtember 13, 2021, CDC-du waxay u baahan tahay baaritaan hore ee safarka ee martida la tallaalay in lagu qaado laba maalmood ka hor taariikhda dhoofinta. Haddii bad-mareenku yahay Sabtida, imtixaanka waxaa la qaadi karaa Khamiista iyo Jimcaha, iyo ilaa Sabtida dambe, haddii laguu ballanqaado inaad natiijadaada ku hesho waqtigii lagu soo geli lahaa.
Caddaynta tallaalka, sida soo socota, ayaa looga baahan doonaa boosteejada ka hor inta aanad fuulin:
Diiwaanka asalka ah ee tallaalka oo ay soo saartay maamulka caafimaadka ee dalka ee maamula tallaalka (sida, Kaarka Diiwaanka Tallaalka ee CDC). Nuqulada ama sawirrada lama aqbalo.
Shahaadada dhijitaalka ah ee COVID-19 (QR code la aqbali karo), diiwaanka tallaalka COVID-19 ee bixiyaha daryeelka caafimaadka (emailka dijitaalka ee asalka ah ayaa la aqbalay), diiwaanka caafimaadka elektiroonigga ah ama diiwaanka Nidaamka Macluumaadka Tallaalka ee dawladda ayaa sidoo kale la aqbali karaa.
Magaca iyo taariikhda dhalashada ee ku jirta diiwaanka tallaalka waa inay la jaanqaadaan dukumintiga safarka ee martida oo ay tusaan martida si buuxda loo tallaalay. Taariikhaha tallaalka waa inay muujiyaan martida inay dhammaystirtay qiyaasaha loo baahan yahay ugu dambayn 14 maalmood ka hor taariikhda dhoofinta. Tan micnaheedu waxaa weeye maalinta soo -gelinta, 15 maalmood ayaa ka soo wareegtay markii la qaatay qiyaastii ugu dambaysay. Nooca tallaalka, taariikhaha la maamulay, iyo tirooyinka badan waa inay si cad u muuqdaan.
Waxaan ku talinaynaa martida inay haystaan ​​macluumaadka xiriirka (emaylka iyo taleefanka) oo isla markiiba laga heli karo bixiyaha daryeelka caafimaadka ama goobta caafimaad ee bixisay shahaadada, si loo ansixiyo tallaalka haddii loo baahdo. Goobta diiwaangelinta tallaalka ayaa sidoo kale la isticmaali karaa.
Martida waxaa si xoog leh loogu dhiirigelinayaa inay dib u eegaan diiwaanadooda tallaalka oo ay hubiyaan inay buuxiyaan heerarkeenna, iyo sidoo kale inay haystaan ​​caddeyn natiijadooda diidmada COVID-19, ka hor inta aysan u safrin terminaalka badda si looga hortago xaalad laga yaabo inaysan awoodin inay maraan u qalmaan lacag celin
Socdaallada ka baxaya Mareykanka, CDC waxay u baahan tahay labada tallaal ee taxane 2-qiyaas ah inay isku nooc ahaadaan. Waxay kaloo aqbalaan inay isku daraan tallaalada mRNA kaliya (Pfizer iyo Moderna). Ma jiro isku -darka tallaal kale oo buuxiya shuruudaha loo tixgeliyo in si buuxda loo tallaalay. Tusaale ahaan, Kanadiyaanka ama martida kale ee caalamiga ah ee helay isku -darka AstraZeneca iyo Pfizer waxaa loo tixgeliyaa inaysan tallaalin CDC. Martida aan si buuxda loo tallaalin, sida waafaqsan shuruudahan, waxaa loo tixgelin doonaa inaan la tallaalin waxayna u baahan yihiin inay codsadaan ka -dhaafitaanka tallaalka.
Martida aan la tallaalin - Ka dhaafida Heerarka Tallaalka
Shuruudaha loogu talagalay maraakiibta dalxiiska si ay u galaan dekadaha ka baxsan Mareykanka ayaa sii socda iyo Carnival Cruise Line waa inay si buuxda ugu hoggaansamaan xeerarkan. Ka -dhaafitaannada tallaalka ee socdaallada Kariibiyaanka ayaa ku koobnaan doona tiro aad u yar oo carruur ah oo ka yar 12 jir, iyo dhallinta iyo dadka waaweyn ee leh xaalad caafimaad kuwaas oo bixin kara xaqiijin qoraal ah oo ka timaadda bixiyaha caafimaadkooda in aan la tallaali karin sababo caafimaad awgood. Doonyahayaga ka yimaadda Florida, Texas, Louisiana, iyo Maryland waxay ku shaqayn doonaan shuruudahan illaa Diseembar 31, 2021 iyada oo loo malaynayo in xannibaadaha hadda jira iyo kuwa sii kordhaya ee lagu soo rogay meelaha ay sii ahaan doonaan.
Ka -dhaafitaannada tallaalka ee maraakiibta ka baxaya Long Beach, California waxay sii ahaan doonaan kuwo loo aqbalo carruurta ka yar 12 sano iyo sida uu farayo sharciga federaalka Mareykanka (hoy u ah sababo caafimaad iyo rumaysad diimeed oo si dhab ah loo hayo).
On Carnival Miracle® oo ka socota Seattle; Carnival Pride® Oktoobar 31, 2021 oo ka socota Baltimore; Carnival Glory® November 28, 2021 oo ka timid New Orleans; iyo Carnival Miracle® Nofeembar 28, 2021 oo ka socota Long Beach, ka -dhaafitaannada tallaalka waxaa la dejin doonaa oo keliya sida sharcigu farayo.
Ka-dhaafitaannada carruurta iyo dadka waaweyn looma dammaanad qaadayo oo awoodda ayaa la koontaroolayaa iyadoo lagu saleynayo tirada guud ee martida la tallaalay ee la saadaalinayo inay saaran yihiin. Martida aan la tallaalin ee la siiyay ka -dhaafitaan waa inay u hoggaansamaan shuruudaha iyo hab -maamuuska qaarkood, oo ay ka mid yihiin:
Soo bandhigida PCR COVID-19 tijaabo diidmo ah marka la soo galayo, oo la qaaday inta u dhaxaysa 72 iyo 24 saacadood ka hor taariikhda dhoofitaanka (tusaale ahaan, haddii dhoofintu tahay Sabtida, baaritaanka waxaa la qaadan karaa wakhti kasta Arbacada ilaa Jimcaha, laakiin ma aha subaxdii soo -saaridda). Martida aan la tallaalin waa inay qaataan tijaabada antigen -ka oo dheeraad ah marka la soo gelinayo, oo ay mar labaad tijaabiyaan 24 saacadood gudahood marka laga tago dhammaan safarrada ka dheer 4 maalmood. US $ 150 qofkiiba lacag ayaa lagu qiimeyn doonaa koontada Sail iyo Sign ee martida si loogu daboolo kharashka baaritaanka, warbixinta iyo baaritaannada caafimaadka iyo badbaadada. Carruurta ka yar laba sano waa laga dhaafay shuruudaha imtixaanka.
Shuruudaha Caymiska Safarka - Maraakiibta Ku Salaysan Florida iyo Texas
Martida aan la tallaalin ee ku safraya markab ka baxaya Florida ama Texas waa inay muujiyaan caddaynta caymiska safarka inta lagu jiro soo gelitaanka. (Fiiri qeybta hoose si aad u hesho faahfaahin buuxda oo ku saabsan shuruudaha caymiska safarka.)
Qoraalka Dhakhtarka - Florida, Texas, Louisiana, iyo Maraakiibta Ku Salaysan Maryland
Haddii aad heshay ka-dhaafitaan tallaal sababo caafimaad awgood, warqad ka timid bixiye caafimaad oo sheegaysa in martida aan la tallaali karin sababo caafimaad awgood waa in lagu soo bandhigaa gelitaanka.
Booqashooyinka Xeebaha iyo Dalxiisyada
Martida aan la tallaalin kaligood ma aadi karaan xeebaha. Martidu waxay kaliya ka soo degi karaan dekadaha wicitaanka haddii lagu ballansado socdaalka xumbo ee ay maalgeliso Carnival.
Safarrada xumbo ee Carnival-ansixiyay waa dalxiisyo ka shaqeeya deegaan la koontaroolo. Martida waxaa laga soo kaxayn doonaa markabka ilaa dalxiiskooda waxayna ku noqon doonaan markabka isla marka ay ka soo noqdaan dalxiiska xeebta. Joogsi aan la qorsheyn lama oggola (sida, dukaamada hadiyadaha, baararka, maqaayadaha, iwm).
Haddii ay dhacdo inaad doorato inaadan iibsan dalxiis xumbo, booqashooyinka xumbo waa la iibiyaa, ama la baajiyaa cimilada awgeed, martida aan la tallaalin waa inay ku sii jiraan guddiga.
Martida ka qaybgalaya socdaalka xumbo, iyadoon loo eegin heerka tallaalka, waa inay raacaan dhammaan hab -raaca socdaalka iyo hagitaanka maxalliga ah ee ku saabsan tijaabinta/baarista, maaskaro xidhashada, fogeynta jirka, iwm. booqasho. Tusaale ahaan, iyada oo ku saleysan heshiiska aan la leenahay San Juan, martida aan la tallaalin waa inay ku sii jiraan guddiga inta aan booqashada halkaas ku joogno.
Martida aan u hoggaansamin bay'ada la kontoroolo ee socdaalka xumbo ayaa laga saari doonaa socdaalka.
Haddii safarkaagu uu booqdo deked gaar loo leeyahay, sida Half Moon Cay iyo Princess Cays, martida aan la tallaalin ayaa kaligood xeebta tegi kara ama iibsan kara mid ka mid ah safaradayada.
Fadlan tixraac noo Ku noqo Su'aalaha Adeegga si aad u hesho liis dhammaystiran oo ah borotokoolladayada iyo shuruudahayaga, kuwaas oo sii socda si ay u kobcaan oo is -beddeli kara ogeysiis hore.
Codsiga ka-dhaafitaanka awoodda-maaraynta waa in lagu soo gudbiyaa 48 saacadood gudahood marka la sameeyo boos celin cusub. Codsiyada waa la baaraandegi doonaa ka dib marka ballan -bixinta si buuxda loo bixiyo, iyadoo la raacayo nidaamka taariikhda dhoofinta, iyo markaan dhammaystirno qiyaasta martida la tallaalay.
Haddii aad tahay marti aan la tallaalin, boos celintaada looma tixgelin doono xaqiijin haddii aadan helin ka -dhaafitaan la oggolaaday, kaas oo la soo saari doono 14 maalmood gudahood markabka. Marti kasta oo aan la tallaalin ee ka -reebitaankooda la oggolaaday waxaa laga rabaa inay dib -u -eegaan oo ay oggolaadaan dhammaan xannibaadaha iyo hab -maamuusyada kor ku qoran ka hor intaan la fuulin markabka.
Haddii aynaan awoodin inaan ansixino codsiga, martidu waxay yeelan doontaa ikhtiyaar ah inay ka joojiso martida aan la tallaalin boos celin, u guurto taariikhda dhoofinta mustaqbalka ama baajiso iyadoo lacag buuxda loo soo celiyo qaabkii hore ee lacag bixinta. Nasiib darro, kuma caawin karno kharashyada la xiriira codsi ka-dhaafitaan oo la diiday, martiduna waxay qaataan dhammaan khataraha la xiriira kharashaadka safarka ee aan la soo celin karin (tusaale, qiimaha hawada, hudheelka).
Waxaan aqoonsannahay in martida aan la tallaalin ay wajihi doonaan xannibaadyo ku -meelgaar ah inta lagu jiro wajiga hore ee dib -u -bilaabashadayada, oo ay weheliso kharashyo dheeri ah oo loogu talagalay baaritaanka iyo caymiska waxaanan ku rajo weynahay in hab -maamuusyadani ay sii socon doonaan waqti ka dib.
Dhammaan martida ku safraya safarrada gadaal iyo gadaal, iyada oo aan loo eegin xaaladda tallaalka, waxay u baahan doonaan in lagu tijaabiyo inta u dhaxaysa safarada.
SHURUUDAHA CAYMISKA CAAFIMAADKA EE MADAXAAN LA SOO SAARIN - FLORIDA & TEXAS OO KU SAABSAN SHABAKADAHA*
Martida aan la tallaalin ee ku safraya markab ka baxaya Florida ama Texas waa inay muujiyaan caddaynta caymiska safarka inta lagu jiro soo gelitaanka. Shuruudahan ayaa hadda laga dhaafayaa carruurta ka yar 12 oo aan u qalmin tallaal. Si kastaba ha ahaatee, waalidiinta waxaa lagula talinayaa in iibsashada caymiska safarka ee carruurtooda aad loogu taliyo.
Shuruudaha siyaasadda: ugu yaraan US $ 10,000, qofkiiba, caymiska kharashka caafimaadka iyo US $ 30,000 caymiska daadgureynta caafimaadka degdegga ah iyo iyada oo aan laga saarin COVID-19.
Siyaasadda caymisku waa inay u magacowdaa martida aan la tallaalin siyaasad ahaan ama ka -faa'iideyste waxaana laga iibsan karaa shirkadda caymiska safarka ee martida dooratay ama iyada oo loo marayo Ilaalinta Fasaxa Carnival, oo ay ku jirto caymiska loo baahan yahay.
Ilaalinta Fasaxa Carnival ayaa diyaar u ah iibsashada ilaa 14 maalmood ka hor inta aan loo dhoofin martida ku nool Maraykanka (marka laga reebo New York iyo Puerto Rico), Canada (marka laga reebo Quebec), US Virgin Islands (St. Thomas, St. John iyo St. Croix) iyo Samoa Ameerika. (Xusuusnow: ballantaada waa in lagu bixiyaa lacagta Mareykanka.) Haddii aad rabto inaad iibsato Ilaalinta Fasaxa Carnival, fadlan wac 1-800-CARNIVAL, Qorsheeyahaaga Fasax ee Shakhsi ahaaneed, ama la-taliyahaaga safarka.
Martida aan la tallaalin iyadoon la haysan caddaynta caymiska ee loo baahan yahay looma oggolaan doono inay dhoofaan wax lacag celin ahna lama siin doono.
* Iyada oo ku saleysan shuruudaha meelaha qaarkood. Qaar ka mid ah dekadaha loo socdo oo aan u dhoofno waxaa maamula hay'ado ku xiran Carnival oo ku hoos jira oggolaansho dawladeed ama ruqsado.
BARNAAMIJYADA CAAFIMAADKA HORUMARKA
Dhammaan martida waxaa la weydiin doonaa inay dhammaystiraan su'aalaha caafimaadka onlaynka ah 72 saacadood ka hor intaan la dhoofin oo ay maraan baaritaanno caafimaad oo hore loo sii wanaajiyay, kuwaas oo ay ku jiri doonaan xaqiijinta jawaabaha baaritaanka caafimaadkooda, ansixinta dukumiintiyadooda tallaalka iyo baaritaan kasta oo COVID-19 loo baahan yahay.
Waxaan u gudbin doonnaa qof kasta oo leh astaamo iyo astaamo COVID-19, ama lagu garto inuu halis ku jiro, baaritaan caafimaad oo dheeri ah ka hor intaanan u oggolaan inay raacaan. Martida waxaa arki doona shaqaalaheena caafimaadka, raacitaankana waxaa lagu ansixin doonaa iyaga ikhtiyaarkooda. Baadhitaanada labaad (iyo hubinta caafimaadka inta lagu guda jiro safarka) ayaa la samayn doonaa marka loo baahdo.
Marti kasta oo ku tijaabisa wax -qabad wanaagsan, iyo wehelkooda safarka ah ee ku jira isla qol -dawladeed, oo ay weheliyaan xiriiro kale oo dhow, ma awoodi doonaan inay maraan doonida waxaana la siin doonaa sumcadda safarka ee mustaqbalka. (Xiriirka dhow waa shaqsi kasta oo ku jiray 6 cagood qof cudurka qaba/astaamaha wadarta wadarta 15 daqiiqo ama ka badan muddo 24-saac gudahood 14 maalmood kahor intaan la dhoofin.)
Siyaasadda Carnival Cruise Line ayaa ah in qof walba la tallaalo, iyada oo tiro aad u yar laga reebo carruurta ka yar 12 iyo kuwa aan la tallaalin. Habkani wuxuu ka sarreeyaa shuruudaha socdaallada la tallaalay iyadoo la raacayo hagitaanka CDC, wuxuuna buuxiyey shuruudo ay dejiyeen meelaha aan u dhoofno doonyadeenna.
Ka sokow safarrada la tallaalay, waxaan hirgelinnay nidaamyo dhammaystiran oo borotokool ah oo qayb ka ah dib -u -bilaabashadayada, iyada oo la eegayo danaha ugu wanaagsan ee caafimaadka iyo badbaadada martidayada, shaqaalaha iyo meelaha aan u adeegno mudnaanta koowaad. Sababtoo ah kiisas horumar leh oo COVID-19 ah oo ka dhaca dalka oo dhan oo ka mid ah kuwa la tallaalay, ayaa la baajiyay shuruudahayaga tijaabinta kahor safarka oo lagu daro DHAMAAN martida. Waxaan sidoo kale ballaarinay shuruudaha maaskaro ee u baahan martida inay ku xirtaan maaskaro gudaha gudaha meelo badan oo xiran iyo meelaha dadku isugu yimaadaan.
Xitaa haddii ay jiraan hab-maamuusyadan, waxaa laga yaabaa inay jiraan kiisas COVID-19 ah oo saarnaa marka lagu jiro safarkaaga. Maraakiibtayadu waxay leeyihiin xarumo caafimaad oo leh awood u leh ogaanshaha iyo tijaabinta waxayna u qalabaysan yihiin raadinta xiriirka. Shaqaalaheenna si buuxda ayaa loo tallaaley oo mar walba maaskaro ku xirtaan gudaha. Marka la eego hab -maamuuskayaga, kiisaska togan ayaa aad uga hooseeya waxa ay bulshooyinku la kulmaan xeebta. Si kastaba ha ahaatee, marka la eego kala duwanaanshaha Delta ayaa keenaya inay kordhaan kiisaska dadka la tallaalay, waxaa muhiim ah inaad ka war hayso macluumaadka soo socda:
Haddii ay dhacdo martidu waxay xiriir dhow la leeyihiin ama la kulmaan marti kasta ama xubin ka tirsan shaqaalaha tijaabiya cudurka COVID-19, ama muujiya astaamo kasta oo la mid ah cudurka COVID-sida inta lagu guda jiro safarka, iyaga iyo xiriirkooda dhow waxaa looga baahan doonaa inay maraan tijaabinta waxaana laga yaabaa in looga baahdo in lagu karantiilo qolkooda dawladda ilaa kooxdayada caafimaadku go'aansato inay ammaan u tahay inay dib u bilaabaan hawlahoodii maraakiibta.
Haddii martidu ay ku safreen hawo si ay ugu biiraan safarkooda oo ay tijaabiyaan togan marka la soo dhoweynayo oo aysan awoodin inay maraan - ama tijaabiyaan wax wanaagsan inta lagu guda jiro safarka - iyaga iyo dadka u dhow ayaa laga yaabaa in looga baahdo inay karantiiliyaan ka hor intaanay u safrin guriga.
Martida ku go'doonsan doonta waxay heli doonaan sumcad safar mustaqbalka la qiimeeyay oo la mid ah tirada maalmaha karantiilnimada.
Martida ay tahay inay karantiil ku sameeyaan gudaha, Carnival waxay gacan ka geysan doontaa samaynta qabanqaabinta karantiil; si kastaba ha ahaatee, dhammaan kharashyada la xiriira ayaa noqon doona mas'uuliyadda martida.
MASKS & FOGGA JIRKA
Waxaan si adag ugu dhiirigelineynaa dhammaan martida inay xirtaan maaskaro wejiga marka ay gudaha joogaan, gaar ahaan martida aan la tallaalin, oo ay ku jiraan carruurta ka yar 12 sano oo ay tahay inay xirtaan maaskaro goobaha dadweynaha, marka laga reebo markay wax cunayaan ama cabbayaan. Dhammaan martida da'doodu tahay 2 iyo ka weyn waxaa laga rabaa inay xirtaan maaskaro wejiga wiishashka iyo meelaha madadaalada ee gudaha loogu talagalay, dhammaan dukaamada tafaariiqda, iyo khamaarka, marka laga reebo marka wax la cunayo ama la cabbayo. Martida waxaa laga rabaa inay xirtaan maaskaro wejiga ka hor inta aan la fadhiisan qolalka cuntada ee ugu weyn iyo aagga Liido Buffet iyo marmar meelaha kale ee loo cayimay oo ay ku soo badan karaan martida (calaamado ayaa la dhejin doonaa). Intaa waxaa dheer, waji-xidh ayaa looga baahan yahay meelaha ku xeeran markabka sida spa, salon, iyo waxqabad kasta oo gudaha ah oo leh carruurta ka yar 12 sano (ie, Build-A-Bear®, Harbor Family and Sky Zone®).
Dhammaan martidu waa inay xirtaan maaskaro inta lagu guda jiro hawsha dhoofinta iyo dejinta oo dhan (dekadda guriga iyo dekadaha wicitaanka, oo ay ku jiraan hannaanka ka-hor-goynta), inta lagu jiro dalxiisyada xeebaha ee Carnival-ansixiyay iyo inta ay saaran yihiin gaadiid kasta oo gaadiid, oo ay ku jiraan xirmooyinka biyaha. Intaa waxaa sii dheer, marka ay xeebta tagayaan, martidu waa inay u diyaar garoobaan inay raacaan dhammaan tilmaamaha maxalliga ah ee la xiriira maaskaro iyo fogeynta jirka. Xaaladda tilmaamaha maxalliga ah ayaa lala wadaagi doonaa martida ka hor inta aan la dejin meesha la doonayo.
FIIRO GAAR AH: Saraakiisha caafimaadka Alaska ee la socda xaaladda xeebta waxay aad ugu taliyeen in dhammaan martida, oo ay ku jiraan kuwa sida buuxda loo tallaaley, ay xirtaan maaskaro wejiga mar walba inta ay joogaan gudaha iyo dibadda marka aan la ilaalin karin fogeynta jirka. Xeerarka Mareykanka ayaa dhigaya in dhammaan dadka ay xirtaan maaskaro wejiga gaadiidka dadweynaha oo ay ku jiraan basaska, tareenada, basaska, garoomada diyaaradaha, diyaaradaha iyo doonyaha maalinlaha ah.
Martida la tallaalay looma baahna inay joogteeyaan masaafada jirka markabka dushiisa.
Waxaa lagu talinayaa in martida aan la tallaalin ay joogteeyaan fogeynta jirka sida soo socota:
Gudaha - Ka fogow ugu yaraan 6 fiit dadka kale ee aan ku jirin kooxda wehelkaaga safarka. Sidaas oo kale, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad jaranjarada qaado mar kasta oo ay suurtogal tahay, haddii aad awooddo inaad sidaas samayso.
Dibedda - Ka fogow ugu yaraan 3 fuudh dadka kale marka aanad xidhnayn maaskaro oo aanad ku jirin kooxda wehelkaaga safarka.
BARNAAMIJYADA DHALINYARADA & ZONE SKY®
Camp Ocean ™: Barnaamijyada carruurta la kormeero ee loogu talagalay carruurta ka yar 12 sano ee Camp Ocean lama bixin doono waqtigan.
Goobaabin “C” ® & CLUB O2®: Dhallinyarada iyo dhallinta aan la tallaalin looma oggolaan doono inay ka qaybgalaan barnaamijyada “Youth Circle” C ee kormeera iyo CLUB O2, ama inay galaan Sky Zone® haddii ay ku socdaan Carnival Panorama®.
CASINO - LA SOO CELIYAY SEPTEMBER 8, 2021
Si kor loogu qaado badbaadada, fogeynta jirka iyo caafimaadka dadweynaha, waxaan cusbooneysiinay borotokoollada khamaarka ee saaran, Sabtida Sebtember 11.
Kasiinooyinka waxaa loogu talagalay ciyaartoy firfircoon iyo saaxiibbadood oo keliya; ma jirto wax kulan ah oo ku jira casinos haddii kale.
Kuraasta miisaska ciyaarta iyo boosaska waxaa loo qoondeeyay ciyaartoy kaliya.
Ma jiro sigaar lagu cabbo casino haddii aadan fadhiisan oo ciyaarin.
Sigaar -cabista laguma oggolaan doono casino marka la xiro.
Martida waxaa laga filayaa inay xirtaan wajiga wejiga haddii aysan sigaar cabbin ama aysan cabin cabbitaankooda.
Baarka casino waa la xiray; cabitaannada waxaa loo dhiibi doonaa cayaartoyda casino shaqaalaha baarkayaga.
Waxaan u mahadcelineynaa taageerada martideena ee hab -maamuusyadan la hirgaliyay iyada oo la eegayo qof walba dantiisa ugu wanaagsan.
KHIBROOYINKA SHORESID SAFE
Martida la tallaalay ayaa laga yaabaa inay ka qaybgalaan dalxiisyada ay Carnival ku shaqayso iyo daawashada madaxbannaan. Martida aan la tallaalin kaligood ma aadi karaan xeebaha. Martidu waxay kaliya ka soo degi karaan dekadaha wicitaanka haddii lagu ballansado socdaalka xumbo ee ay maalgeliso Carnival. Si kastaba ha noqotee, haddii safarkoodu uu booqdo deked gaar loo leeyahay, sida Half Moon Cay iyo Princess Cays, martida aan la tallaalin ayaa kaligood xeebta tegi kara ama iibsan kara mid ka mid ah safaradayada.
Waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la raaco hab -raaca caafimaad ee deked kasta oo aan booqanno, taas oo ay gacanta ku hayaan maamulada maxalliga ah lana beddeli karo ogeysiis hore. Martidu waa inay u diyaar garoobaan inay raacaan tilmaamaha maxalliga ah ee la xiriira xirashada maaskaro, fogeynta jirka, baaritaanka/baaritaanka caafimaadka, iwm.
FIIRO GAAR AH: Shuruudaha aan u soconno ayaa sii socda oo ku saleysan heshiiska dekedda aan la leenahay San Juan, martida aan la tallaalin waa inay ku sii jiraan guddiga inta lagu jiro wicitaankaas.
DEEGAANKA CAAFIMAADKA AH
Fadlan naga caawi inaan ilaalino jawi caafimaad leh oo saaran markabka adoo isticmaalaya weelka gacmaha lagu maydho iyo kuwa wax lagu nadiifiyo gacmaha meelaha laga soo galo iyo meelaha gaadiidka badan ee markabka oo dhan. Waxaan sidoo kale u baahan doonnaa martida inay raacaan tilmaamahayaga ku saabsan siyaabaha lagu caafimaadi karo markabka iyo marka xeebta, iyada oo loo marayo barnaamijyada maalinlaha ah, nidaamyada madadaalada, ogeysiisyada, suugaanta-gudaha, iyo Carnival HUB App.
Sababtoo ah geedi socodyada soo-gelinta cusub, dhammaan martida waxay u baahan doonaan inay dhammaystiraan Is-diiwaangelinta onlaynka ah oo ay doortaan Ballanta Imaanshaha. Soo-galitaanka Tooska ah waxaa loo heli karaa martida Suite, Platinum iyo Diamond 16 maalmood kahor dhoofinta; marin -u -helka guud wuxuu bilaabmaa 14 maalmood kahor intaan la dhoofin. Waxaa muhiim ah in martidu ay yimaadaan waqti ku habboon maadaama dadka hore u soo degay aan la dejin karin oo la weydiin doono inay ku soo laabtaan waqtigii loogu talagalay. Iyada oo qof walba iskaashi ka dhaxeeyo, waxaan wada shaqayn karnaa si aan u dammaanad qaadno bixitaanka waqtiga iyo bilowga fasaxaaga!
QORSHAHA CARNIVAL -KA SI AY U SHAQEEYAAN SHIRKADAHA SOO SOCDA DEGMADA 31, 2021 HOOS KA DHAXEEYA HEERARKA KHATARTA TALAALKA:
Carnival Vista® oo ka socota Galveston
Carnival Horizon® oo ka socota Miami
Carnival Breeze® oo ka socota Galveston
Carnival Miracle® oo ka socota Seattle
Mardi Gras ️ ️ oo ka yimid Port Canaveral
Carnival Magic® oo ka socda Port Canaveral
Carnival Sunrise® oo ka socota Miami
Carnival Panorama® oo ka socota Long Beach
Carnival Pride® oo ka timid Baltimore; Shiraaca ayaa bilaabmaya Sebtember 12, 2021
Carnival Dream® oo ka socota Galveston; Shiraacyada oo bilaabmaya Sebtember 19, 2021
Carnival Glory® oo ka socota New Orleans; Shiraacyada oo bilaabmaya Sebtember 19, 2021
Carnival Miracle® oo ka socota Long Beach; Shiraacyada ayaa bilaabmaya Sebtember 27, 2021
Carnival Freedom® oo ka socota Miami; Shiraacyada oo bilaabmaya Oktoobar 9, 2021
Carnival Elation® oo ka socota Port Canaveral; Shiraacyada oo bilaabmaya Oktoobar 11, 2021
Carnival Valor® oo ka socota New Orleans; Doonyaha dhoofintu waxay bilaabmayaan Noofambar 1, 2021
Carnival Legend® oo ka socota Baltimore; Shiraacyada oo bilaabmaya Noofambar 14, 2021
Carnival Pride® oo ka socota Tampa; Shiraacyada oo bilaabmaya Noofambar 14, 2021
Carnival Conquest® oo ka socota Miami; Shiraacyada oo bilaabmaya December 13, 2021
Carnival Radiance® oo ka socota Long Beach; Shiraacyada oo bilaabmaya December 13, 2021